Dammaanadda - AOOD Technology Limited
Maaddaama hogaamiyaha silsiladda korantada ee hormuudka u ah giraanta alaab -qeybiyeyaasha adduunka oo dhan, AOOD waxay leedahay saddex xuddunta: teknolojiyadda, tayada iyo qanacsanaanta. Iyagu waa uun sababta aan u noqon karno hoggaamiye. Tiknoolajiyadda horumarsan iyo tayada sare waxay xaqiijinayaan awoodda tartan ee AOOD, laakiin adeegga buuxa oo dhammaystiran wuxuu macaamiisha ka dhigayaa inay nagu tiirsan yihiin.
Furaha adeegga macmiilka ee AOOD waa xirfadle, degdeg ah oo sax ah. Kooxda adeegga AOOD si fiican ayay u tababaran yihiin, waxay leeyihiin aqoon xirfadeed oo xirfad leh iyo dabeecad adeeg wanaagsan. Dhibaato kasta oo macmiilku sheegay, waxaa looga jawaabi doonaa 24 saacadood gudahood ha ahaato ka hor iibinta ama iibinta kadib.
Dammaanadda Hubinta Tayada
Dhammaan qeybaha giraanta giraanta silsiladda AOOD waa la dammaanad qaaday hal sano marka laga reebo alaab gaar ah, taas oo kuu oggolaaneysa inaad ku soo celiso qayb kasta oo cillad leh beddelka hal sano gudaheed laga bilaabo taariikhda iibsiga asalka ah ee qaansheegta,
1. Haddii wax cillad ah laga helo agabka iyo/ama farsamada gacanta, taas oo keenta guuldaro tayo leh.
2. Haddii giraanta siibashada ay waxyeello u soo gasho xirmo aan habboonayn ama gaadiid.
3. Haddii giraanta siibitaanku si caadi ah u shaqayn kari waydo marka si caadi ah loo isticmaalo.
FIIRO GAAR AH: Haddii shirarka giraanta silsiladda la filayo in loo adeegsado jawi xun ama jajaban, fadlan noo sheeg bayaanno cad, sidaa darteed waxaan ka dhigi karnaa badeecadaha si gaar ah loola dhaqmo si ay ula kulmaan filashadaada gaarka ah.